Ọrịa ọrịa | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ọrịa ọrịa
Ọrịa Chicken: Mgbaàmà, Mgbochi, na Ọgwụgwọ
Na ụwa anyị, anụ ụlọ ma ọ bụ anụ ọkụkọ bụ otu n'ime alaka kachasị mma nke ugbo. Ma iji mee ka nnụnụ dị mma dị mkpa ka ị nyochaa ọnọdụ njide ha. Uru gị na-adabere na ya. Ọ dị mkpa iburu n'uche na ọtụtụ ọrịa na-adabere na nri kwesịrị ekwesị na microclimate.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ndị na-ebigbọ mmiri na-agbaba, na-agba ume, afọ ọsịsa: otu esi agwọ ọrịa nke ọkụkọ
Broilers na-ewu ewu ma ndị ọrụ ugbo na ndi nwe obere farmsteads. Быстрые темпы роста и простота в содержании привлекают многих. Будущим владельцам будет полезно узнать, какие болезни могут проявиться у цыплят, каковы их симптомы и лечение.Nguzogide nke broilers na ọrịa Ndị na-akpagbu kwa afọ na-adịghị mfe, ya mere ha chọrọ nlebara anya pụrụ iche.
Ọrịa nke ọkụkọ broiler: olee otu na ihe ị ga-esi na-emeso ọrịa ndị na-abụghị ndị nwere nsogbu
Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ugbo nwe ala na ugbo ala, ịzụta ọkụkọ broiler, chere na ọ ga-abụ dị ọnụ ala ma bụrụ ndị a pụrụ ịdabere na ya karị ịkụlite ọkụkọ dị otú ahụ maka iji ihe ndị na-akpali akpali. Ọtụtụ ndị agafela otú a. Otú ọ dị, ọ pụtara na a na-agbakwụnye akụkụ ụfọdụ nke ihe ndọba ụba ndị a na-apụghị ịdaba adaba na uru ndị a, otu ebe dị mkpa n'etiti ọrịa ọkụ nke broiler ọkụ, bụ ndị nwere mgbaàmà dị mfe, na usoro ọgwụgwọ a nwalere ọtụtụ afọ nke ahụmahụ.
Taa, anyị ga-ekwu maka ọgwụ dị otú ahụ dị ka "Baytril", nke a na-ejikarị mee ihe na ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ. A na-eji ya agwọ ọrịa mycoplasmosis na ọrịa nje nke anụ nnụnụ. Na n'isiokwu a, ị ga-amụta banyere isi ihe a na-eji eme ihe. Nkọwapụta, mejupụta na ịhapụ ụdị ọgwụ ahụ ọgwụ ahụ nwere 25 g nke enrofloxacin.
Otu esi emeso afọ ọsịsa na ọkụkọ broiler
A na-azụlite ndị na-eji mmiri ozuzo na anụ ugbo na ezinụlọ. E nwere ihe kpatara ya - ndị ọkụkọ dị otú ahụ dị oke nlekọta na-eto ngwa ngwa. Ma ha na-ebutekwa ndị nna ha nsogbu mgbe ụfọdụ. Otu n'ime nsogbu kachasị emetụta bụ afọ ọsịsa na nnụnụ, n'ihi ya nsogbu a chọrọ nlebara anya iche.
Ndị ọrụ ugbo na-anụ ọkụkọ nke Novice na-arụ ọrụ nke ndị na-azụ anụ, nwere ike ihu ụdị nhụjuanya ahụ dị ka ọkpụkpụ afọ ọsịsa. Kedu ihe kpatara ọrịa ahụ na otu esi emeso ya, anyị tụlere n'isiokwu a. Ihe na-akpata afọ ọsịsa N'ihi ọrịa nsị nwere ike ịbụ: ọrịa kpatara ọnọdụ ọjọọ; obere mma ndepụta; nwetara ndị ọrịa.
Ọkụkọ, dị ka ọkụkọ okenye ma ọ bụ ụdị anụ ọkụkọ ndị ọzọ, nwere ike ibute ọrịa dị iche iche. Otu n'ime ọrịa kachasị egwu nke ọrịa bụ coccidiosis. Ka anyị lebakwuo anya n'ihe bụ coccidiosis, ihe mere o ji emee na otu esi enyere nnụnụ aka ịkwụsị ọrịa a. Kedu coccidiosis? Coccidiosis bụ ọrịa parasitic nke ọrịa na-enweghị atụ nke coccidia kpatara.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ọkụkọ anaghị eto
Ịkwa akwa na-eto eto nwere ike ime ka ndị ọrụ ugbo na-anụ ọkụkọ nwee nsogbu dị ukwuu: na mmalite nke ndụ ha, ọkụkọ na-enwe mmetụta nke ọma na ọnọdụ mpụga - mgbanwe ọ bụla nwere ike imetụta ọganihu ha. Iji zere nke a, ọ dị mkpa iji nlezianya na-achịkwa ọnọdụ ihu igwe nke chicks, iji nyochaa nri ha, iji mepụta mgbochi iji merie ọrịa, yana ịmara ihe bụ isi kpatara ọganihu nke ndị na-eto eto.
Otu esi eme ka mgbochi, wheezing, ụkwara na ọkụkọ na ọkụkọ
Na usoro ịzụ ụmụ nnụnụ, onye nwere ike izute ụdị mgbaàmà ndị dị otú a dị ka ụkwara na sneezing mgbe ụfọdụ. Mmetụta ndị ọzọ na-eku ume pụkwara ime, dịka iku ume, dị iche iche na-agba ume. Ileghara mgbaàmà ndị a anya nwere ike ịkpata ọnwụ nke nnụnụ na ọnwụ nke akụkụ dị ukwuu nke ndị mmadụ.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ọkụkọ nwere ụkwụ
Chickens, n'ozuzu, abụghị nke ụmụ nnụnụ, nke ọdịnaya ya na nsogbu ụfọdụ. Ma naanị ndị okenye bụ ndị siri ike na ndị na-enweghị atụ. Ọkụkọ, kama nke ahụ, bụ ndị dị nro ma dị nfe, enwere ike ibibi ha ọbụna site na mpempe ọkụ ma ọ bụ obere ọnụ ala na okpomọkụ. Ma, mgbe ụfọdụ, na elekere anya na-ahụ maka ọrịa, enwere nsogbu dị iche iche, dị ka ịgbasa eriri: nnụnụ enweghị ike iguzo ọtọ ma yie ka ọ nọ ọdụ na eriri.
Gịnị mere chicks nwere nku ala
Chickens na-achọkarị nlebara anya site n'aka ndị ịzụlite, n'ihi na nsogbu ụmụ ọhụrụ enwebeghị ike iguzogide mmetụta dị njọ nke gburugburu ebe obibi, ya mere chicks na-ebute ọrịa dị iche iche. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịzaghachi nsogbu ndị zutere, mgbe ahụ, enwere ike ịlafu anụ ụlọ niile.
Gịnị ma ọ bụrụ na ọkụkọ anwụọ
Mgbe a na-azụlite ụdị anụ ọkụkọ na-arụpụta nke ọma, ọtụtụ ndị ọrụ ugbo na-eche nsogbu ndị siri ike, gụnyere ụdị ọrịa niile na nsogbu dị iche iche na-arụ ọrụ nke organism. Otu n'ime ihe kachasị n'etiti ha bụ ọdịda na mpempe ụmụ ọkụkọ. Ihe onu nwere oke uto na-eto eto, dika ngwa ngwa nke aru nwere ike ime ka ndi mmadu nwua.
Kedu otu na esi emeso chickens pullorosis
Obere obere ọkụkọ na-adaba n'ọtụtụ ọrịa ndị na-emekarị ka ọnwụ nwụọ n'izu mbụ nke ndụ ha. N'ezie, ọ na-esiri onye ọrụ ugbo novice ike icheta ụdị ọrịa dị iche iche dị iche iche, ma ị kwesịrị ịma nke ndị nkịtị. N'isiokwu a, anyị ga-aṅa ntị na nsogbu a maara nke ọma dịka pullorosis, ma gwa gị banyere ihe mgbaàmà, nyocha na ọgwụgwọ.
Conjunctivitis na ọkụkọ
Mmeputakwa nke geranium osisi. Kedu ka esi na-eto eto na ulo?
Evergreen shrub fuchsia: na-eto eto n'ụlọ ma na-elekọta osisi